सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणाली बन्डहरू, छोटो अवधि, उच्च उपज, निश्चित आय लगानी, २ 23% वाईटीएम उपज - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र बी २ बी मार्केटप्लेस समाचार
सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणाली बन्डहरू, छोटो अवधि, उच्च उपज, निश्चित आय लगानी, 23% YTM उपज
सम्पादकको पिक अगस्ट 21, 2019 सेप्टेम्बर 11, 2019 डोका कुकुरहरू बन्धन, व्यापार, कर्पोरेट बन्धन, सम्पादकको पिक, स्थिर आय, निवेश
एक वर्ष पहिलेको तुलनामा समान स्टोरमा प्रवेश २.2.3% ले वृद्धि भयो।
सेम-स्टोर शुद्ध अपरेटिंग राजस्व दोस्रो त्रैमासिक २०१ to को तुलनामा 4.9% ले वृद्धि भयो।
दोस्रो क्वाटरमा अपरेटिंग गतिविधिहरूद्वारा उपलब्ध नगद नगद १ year२ मिलियन डलर थियो जुन एक वर्ष अघि 132 (१२) मिलियनको परिचालन गतिविधिमा प्रयोग भएको शुद्ध नगद थियो।
यो हप्ता, दुर्ग राजधानी संयुक्त राज्य अमेरिका मा सबै भन्दा ठूलो सार्वजनिक ट्रेडिंग अस्पताल कम्पनीहरु को समीक्षा गर्न स्वास्थ्य सेवा हेर्छ। सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणाली (NYSE: CYH) पछिल्ला केही बर्षहरु अस्पतालहरु को आफ्नो पोर्टफोलियो तर्कसंगत खर्च गरेको छ। कम्पनीले यस रणनीति को प्रभावहरु लाई महसुस गर्न थालेको छ दोस्रो क्वाटरमा यसको समान स्टोर परिणामहरूले प्रमाणित गरे (माथि हेर्नुहोस्)।
यसको पोर्टफोलियोले अब अझ राम्रो प्रदर्शन सम्पत्ति प्रतिनिधित्व गर्दै, सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणालीसँग सुधार सम्भावनाको ठूलो अवसर छ। स्वास्थ्य सेवा चक्रीय उद्योग होईन र हरेक देश र संस्कृतिका लागि अत्यावश्यक सेवा हो। सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणालीको २०२२ बन्धनमा लगभग २.2022..23.5% को परिपक्वता-बाट परिपक्वता छ, जसले लगानीकर्तालाई विविधिकरणको लागि मात्र अवसर प्रदान गर्दछ, तर पोर्टफोलियो रिटर्न पनि बढायो। डुरिग क्यापिटलले पहिले यी बन्डहरू समीक्षा गरेको छ, र CYH को भर्खरको प्रदर्शनलाई दिईएको छ भने यी बन्धनहरू डुरिग क्यापिटलमा अतिरिक्त तौलका लागि उत्कृष्ट विकल्प देखिन्छन्। निश्चित आय2(FX2) उच्च उपज प्रबन्धित आय पोर्टफोलियो, को एकत्रीकृत प्रदर्शन को तल देखाइएको छ।
दोस्रो क्वार्टर २०१ Results परिणामहरू
वेन टी। स्मिथ (जन्म। सन् १ 1946 s० मा बीमा कम्पनी हुमाना इंकसँग आफ्नो व्यवसायिक जीवन शुरू गरेपछि, उनले १ 1970 1993 from देखि १ 1996 1997 until सम्म हुमानाका अध्यक्ष र प्रमुख अपरेटिंग अफिसर (सीओओ) का रूपमा काम गरे। १ 20012In मा उनी सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणालीको अध्यक्ष र मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त भए। (सीएचएस), २००१ मा अध्यक्षको भूमिका पनि लिएर।  कम्पनीको प्रमुखका रूपमा उनले २०० Tri मा ट्रायड अस्पतालको अधिग्रहण जस्ता परियोजनाहरूको रेखदेख गरेका छन् जुन सीएचएसको आकार दोब्बर गर्न पुग्यो। २०१ 2007 मा उनले स्वास्थ्य प्रबंधन एसोसिएट्सको Health Health. billion बिलियन डलरको अधिग्रहण गरे, जसले CHS लाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो नाफाको लागि अस्पताल संचालक बनायो।
विगत केहि वर्षहरुमा धेरै प्रदर्शनकारीहरुमा आफ्नो पोर्टफोलियो घटाउने अस्पतालहरू बेचे पछि, सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणालीहरूले यसको रणनीतिका फाइदाहरू देख्न सुरू गरिसकेको छ। वेन स्मिथसमुदायका स्वास्थ्य प्रणालीका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कम्पनीको दोस्रो त्रैमासिक परिणामको प्रशंसा गरे:
"यो ध्यान दिन लायक छ कि हाम्रो दोस्रो क्वाटरमा भोल्युम र शुद्ध राजस्व वृद्धिले २०१ of को पहिलो त्रैमासिकदेखि हाम्रो सब भन्दा बलियो प्रदर्शन चिन्ह लगायो।"
पहिलो नजरमा, संख्याहरू यस कथनलाई फिर्ता देखाउँदैन, तर यदि एक सानो अलि गहिरो गरीन्छ, कुहिरो स्पष्ट हुन थाल्छ। जब तपाईं ११ अस्पतालहरू बेच्नुहुन्छ, २०१Y मा CYH गरेमा, त्यसले राजस्वलाई असर गर्छ। ती ११ डाइभ्ट अस्पतालहरूले net 11 million० मिलियन को वार्षिक निवल राजस्व प्रतिनिधित्व गर्थे। त्यसोभए, अवश्य पनि, राजस्वहरू बर्ष-बर्षमा घट्नेछ। यद्यपि CYH सँग यसको समान स्टोर संख्यामा रिपोर्ट गर्न उत्साहजनक समाचार थियो (समान स्टोरले अपरेटि results परिणामहरू जुन २०१ 2018 मा जून ,०, २०१ end मा समाप्त हुने months महिनाको लागि डाइभ्ट गरिएको वा बन्द भएको अस्पतालहरूको नतिजा निकाल्छ)।
समान भण्डारको आधारमा, प्रवेश २.2.3% ले वृद्धि भयो र समायोजित भर्नाहरू १.1.8% ले वृद्धि भई २०१ 2018 को समान अवधिको तुलनामा।
समान भण्डारको आधारमा, शुद्ध अपरेटिंग राजस्व दोस्रो क्वाटरमा २०१ 4.9. को तुलनामा quarter. increased% ले वृद्धि भयो।
दोस्रो त्रैमासिकमा अपरेटिंग गतिविधिहरूद्वारा प्रदान गरिएको शुद्ध नगद १$२ मिलियन डलर थियो, जुन दोस्रो त्रैमासिक २०१ for को operating (१२) मिलियनको परिचालन गतिविधिका लागि प्रयोग गरिएको शुद्ध नगदको तुलनामा।
कम्पनीको दोस्रो क्वाटरमा लगानीकर्ताको प्रस्तुतीकरणले दोस्रो त्रैमासिक र वर्ष-मितिमा समान स्टोर प्रदर्शनको बारेमा थप जानकारीको साथ यस जानकारीको सारांश प्रदान गर्‍यो।
सीवाईएचले स 2019्केत गर्यो कि यसले २०१ of को अन्त्यसम्ममा आफ्नो बिभिन्नतालाई तल झार्दै छ। कम्पनी प्रबन्धनले पनि संकेत गरेको छ कि यसको रणनीतिक पहलको निरन्तर कार्यान्वयनको साथसाथै प्रभावकारी खर्च व्यवस्थापनको साथ "वर्षको पछिल्लो आधामा वृद्धिशील वृद्धि हुनेछ।"
सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणाली (NYSE: CYH) संयुक्त राज्य अमेरिकाका सब भन्दा ठूला सार्वजनिक रूपमा कारोबार गर्ने अस्पताल कम्पनीहरूमध्ये एक हो र देशभरिका समुदायहरूमा सामान्य तीव्र देखभाल अस्पतालहरू र बाहिरी रोगी सुविधाहरूको एक अग्रणी अपरेटर हो। कम्पनीले संयुक्त राज्य अमेरिका भर गैर शहरी र चयन गरिएको शहरी बजारमा स्वामित्व राख्दछ र सम्बद्ध व्यवसायहरू सञ्चालन गर्दछ र अस्पतालहरू मार्फत स्वास्थ्य सेवाहरू प्रदान गर्दछ। यसले समुदाय र यसमा अवस्थित समुदायमा बिरामीहरूलाई बाह्य रोगीहरूको सामान्य र विशेष अस्पताल स्वास्थ्य सेवाहरू र बाह्य रोगीहरूको सेवा प्रदान गरेर राजस्व उत्पन्न गर्दछ। हाल CYH देश भर १ 105 राज्यमा १० 18 वटा अस्पतालको स्वामित्व राख्छ वा लीजमा दिन्छ। कम्पनीले आफ्ना बिरामीहरूलाई यसका सेवाहरूका लागि भुक्तानको माध्यमबाट राजस्व उत्पन्न गर्दछ। यी भुक्तानीहरू सरकारी एजेन्सीहरू (मेडिकेयर र मेडिकेड) निजी बीमा कम्पनीहरूबाट आउँदछन्, र सिधा बिरामीहरू मार्फत।
विकासको लागि तल पार्दै
विगत केहि वर्षहरुमा, सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणालीले देश भरका अस्पतालहरुको आफ्नो पोर्टफोलियो लाई उल्लेखनीय रुपमा कम गरेको छ। नतिजाको रूपमा, कम्पनीसँग अब सम्पत्तिहरूको एक मजबूत पोर्टफोलियो छ। यसका बाँकी अस्पतालहरू उत्तम जनसंख्या बृद्धि, उत्तम आर्थिक बृद्धि र कम बेरोजगारीका साथ अधिक पर्याप्त बजारमा छन्, जसले सुधार विकास क्षमताको लागि अधिक अवसर प्रदान गर्दछ।
स्वास्थ्य सेवा - लगातार आय
स्वास्थ्य सेवा, केहि अन्य उद्योगहरू जस्तै आवास, रिटेल, वा तेल र ग्यासको विपरीत, चक्रीय छैन। स्वास्थ्य सेवा प्रत्येक समाज र संस्कृतिमा एक आवश्यक सेवा / आवश्यकता हो। सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, त्यहाँ सधैँ मानिसहरू छन् जसलाई कि त बिरामी वा चोटपटकको हेरचाह चाहिन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा आज दुई प्रमुख योगदानकर्ताहरू स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता बढाउँदै छन् - हाम्रो जेष्ठ जनसंख्या (those 65+ उमेरका) मा बृद्धि मोटापाको दरको साथ वृद्धि।
अमेरिका पुरानो भइरहेको छ। २०१ 2018 मा, संयुक्त राज्य अमेरिकामा 52 करोड sen० लाख वरिष्ठ नागरिकहरू बसोबास गरिरहेका थिए। २०2060० सम्ममा त्यो संख्या अनुमान गरिएको छ करीव दोब्बर 95 XNUMX मिलियन वरिष्ठ। यसको मतलब 65 23 बर्ष वा माथि उमेरकाले जनसंख्याको २%% बनाउनेछ, जुन आज १%% भन्दा माथि छ। अमेरिकाको यस बुढ्यौलीको कारण, अस्पताल भर्ना बढ्ने आशा गरिन्छ। पहिले नै, अध्ययनले देखाउँदछ कि 16 65 बर्ष वा माथि उमेरकालाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ तीन पटक तिनीहरूको कनिष्ठ साथीहरू - ती to 45 देखि years 64 वर्ष पुरानो। थप रूपमा, वृद्ध बिरामीहरू कम उमेरका बिरामीहरूको तुलनामा अस्पतालमा लामो औसत औसत लम्बाइ राख्ने झुकाव राख्छन्, र उनीहरूको बृद्धि भएकोले प्रायः जसो चिकित्सा आवश्यकता बढेको छ। हाम्रो वरिष्ठ जनसंख्या बढ्दै जाँदा स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता पनि पर्दछ।
मोटोपनाको बढ्दो महामारी अर्को कारक हो जसले स्वास्थ्य सेवाको लागि आवश्यक ड्राइभलाई निरन्तरता दियो। यस अनुसार अमेरिकी मेडिकल एसोसिएसन, भर्खरको २०१ National मा सम्पन्न भर्खरको राष्ट्रिय स्वास्थ्य र पोषण परीक्षा सर्वेक्षण (NHANES) बाट डाटा अब संकेत गर्दछ कि राष्ट्रको मोटोपना दर वयस्कहरूको लागि करीव %०% र २ देखि १ years वर्ष उमेरका बच्चाहरूको १ 2018.।% छ। राष्ट्रको मोटापाको दर बढ्दै जाँदा स्वास्थ्य स्थितिहरू मोटापासँग सम्बन्धित छ। यसमा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, संयुक्त समस्याहरू, साथै क्यान्सरको केहि प्रकारहरूको बढेको जोखिम समावेश छ।
एक जारीकर्ताको यसको हालको serviceण सेवाको वर्तमान क्षमताको रूपमा लगानीकर्ताहरूका लागि सूचकमा ब्याज कभरेज। तरलता पनि महत्त्वपूर्ण छ, किनकि यसले कम्पनीलाई नगद प्रवाहमा क्वार्टर देखि क्वार्टरमा परिवर्तन गर्न मद्दत गर्दछ। दोस्रो क्वाटरमा सीवाईएचले १.१x ब्याज कभरेजका लागि operating २ 297 करोड डलरको ब्याज व्यय र-२265 मिलियनको ब्याज व्यय (-२ करोड depण नगरा र हानीकारक चार्जको प्रभावबिना) अपरेटि income आय (income २.। मिलियन डलर) घटायो। जून ,०, २०१ of सम्म, CYH सँग पर्याप्त तरलता थियो,, २०० मिलियन भन्दा बढी नगद र थप २1.1 मिलियन डलर अण्डरभन रिभोलभर क्षमतामा।
सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणाली बन्डहरू, अग्रणी वित्तीय समाचार, बजार अनुसन्धान, र अधिकमा अपडेट प्राप्त गर्न साइन अप गर्नुहोस्!
धितोधारकहरूको लागि जोखिम यो हो कि सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणालीहरूले यसको operatingण भार सम्बोधन गर्न जारी राख्दै यसको परिचालन परिणामहरू सुधार गर्न सक्दछ। अस्पतालहरू, उनीहरूको स्वभावले नै पूंजी निर्माण र सञ्चालनको लागि गहन छन्। कुन स्वास्थ्य अस्पताल राख्ने र कुन बेच्ने भनेर निर्णय गर्न सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणालीहरूले कडा मेहनत गरेका छन्। परिणाम दोस्रो क्वाटरमा समान स्टोर बिक्री तथ्या .्कहरू द्वारा प्रमाणित रूपमा उत्साहजनक देखिन्छ। Debtणको सन्दर्भमा, CYH सँग अहिले र २०२२ को बीचमा यसको matण परिपक्वता सम्बोधन गर्न पर्याप्त स्रोतहरू छ जस्तो देखिन्छ (जसमा यी 2022..6.875% कुपन २०२२ बाण्डहरू समावेश छन्), तर यसले यसको ठूलो loadण भार सम्बोधन गर्नुपर्नेछ जुन २०२ in मा परिपक्व हुन्छ। जुन चार बर्ष पछि छ। , CYH सँग addressण घटाउने र debtण पुनर्वित्त मार्फत यसलाई सम्बोधन गर्न पर्याप्त समय हुनुपर्दछ।
२०२० अमेरिकी राष्ट्रपति पदको दौड चर्किनुको साथसाथै स्वास्थ्यसेवा सुधार (फेरि) वरपर धेरै चर्चाहरू भइरहेको छ र त्यसले तथाकथित "एकल भुक्तानी गर्ने स्वास्थ्य सेवा" को बारेमा छलफल भएको छ, जसमा सरकारले सबै स्वास्थ्य सेवाहरू निजी र निजीकरणको नियमन गर्दछ। बीमा विगतको कुरा हुनेछ। जबकि कोहीले एकल भुक्तानी गर्ने स्वास्थ्य सेवालाई हाम्रो वर्तमान प्रणालीको रामबाण उपायको रूपमा हेर्छन् जहाँ बीमा कम्पनीहरूले शटहरू भन्छन् र औषधी र प्रक्रियाहरू प्राय जसो बिमाको साथ पनि महँगो हुन्छन्, जस्तो देखिन्छ यो सजिलो छैन। भर्मन्टले एकल भुक्तान गर्ने स्वास्थ्य सेवा लागू गर्न असफल भयो। सार्वजनिक वित्त पोषण काम गर्दैन जब सम्म तपाईं लागत नियन्त्रण मा प्राप्त। यदि एकल दाता स्वास्थ्य सेवा वास्तविकतामा परिणत हुन्छ भने, सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणाली जस्ता कम्पनीहरू निश्चय नै प्रभावित हुनेछन्। हेरचाहको लागि भुक्तान प्रणालीको त्यस प्रकार अन्तर्गत धेरै कम हुन सक्छ जसले CYH को नाफामा असर गर्छ।
सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणालीहरूले यसको दोस्रो सीईओ वेन स्मिथले उल्लेख गरे जस्तै राम्रो दोस्रो क्वाटर थियो। कम्पनीले आफ्नो मुख्य सम्पत्ति छनौट गरेर बाँकीको बिक्रीको कडा मेहनत गरेको छ। अब, राजस्व वृद्धि र प्रभावी ढ effectively्गले खर्च प्रबन्ध गर्न रणनीतिक पहलका साथ कम्पनीले कुनामा मोडि and गरेको छ र अधिक लाभदायक भविष्यतर्फ अगाडि बढेको छ। कम्पनीको २०२२ बन्धनहरू हाल महत्त्वपूर्ण छुटमा बिक्री भइरहेको छ, जुन एक पूरै २.2022..23.5% उपज-परिपक्वतामा अनुवाद हुन्छ। स्वास्थ्य सेवा आवश्यक छ, र यी CYH २०२bबॉन्डहरूले लगानीकर्ताहरूलाई स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा भाग लिने उत्कृष्ट अवसर प्रदान गर्दछ। यस कुरालाई ध्यानमा राख्दै, यी २०२२ बन्धनहरू दुर्ग राजधानीमा अतिरिक्त तौलका लागि आदर्श हुन् निश्चित आय2(FX2) उच्च उपज प्रबन्धित आय पोर्टफोलियोमाथि देखाईएको छ।
अमेरिकी र विदेशी मुद्रा छोटो बन्ड पोर्टफोलियो
एरिस्टोक्रेट्स एक्सयूएनएमएक्स। Com
लाभांशको साथ विविध ब्लू चिप स्टक
लाभांश संग ब्लू चिप स्टक
जारीकर्ता: सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणाली
टिकर: (NYSE: CYH)
बन्ड कुपन: 6.875%
परिपक्वता: 02 / 01 / 2022
रेटिंग: C / CCC-
मूल्य: .70.0 १०.१२XNUMX
परिपक्वता को लागी: ~ 23.50%
प्रकटीकरण: डुरिग क्यापिटल र केहि ग्राहकहरूले CYH को २०२२ बन्धनमा पदहरू लिन सक्दछन्।
2022 तीव्र देखभाल अमेरिकी मेडिकल एसोसिएसन बन्धन बन्ड अनुसन्धान बन्ड समीक्षा बन्धन सांप्रदायिक समाचार सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणाली कर्पोरेट बन्धन CYH डाक्टर डुरिग दुर्ग राजधानी आकस्मिक कक्ष ER स्थिर आय निश्चित आय2FX2 स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य सेवा बन्धन धेरै उब्जनी उच्च उपज बन्धन उच्च उपज बांडहरू उच्च उपज निश्चित आय उच्च उपज अस्पताल अस्पताल सेवाहरू अस्पताल आय जंक बन्धन बजार अनुसन्धान मेडिकाइड चिकित्सा हेरविचार चिकित्सा सेवा चिकित्सा NYSE: CYH आउट पेशेंट चिकित्सक सार्वजनिक ट्रेड अनुसन्धान छोटो समय छोटो अवधि का बन्धन सर्जरी Yield
केहि प्रचारकहरू द्वारा LGBT को घृणा - तिनीहरू न्याय गरेर पाप गर्दैछन्!
एक्सेप्टिभ्समा अभिव्यक्ति - के तिनीहरू उपयोगी छन्?